CDMA 800MHz ဖုန်းများ၏ ငွေဖြည့်ကဒ်သက်တမ်းအား ၁၀နှစ်မှ ၆လသို့ လျော့ချကန့်သတ် — MYSTERY ZILLION
CDMA 800MHz ဖုန်းများ၏ ငွေဖြည့်ကဒ်သက်တမ်းအား ၁၀နှစ်မှ ၆လသို့ လျော့ချကန့်သတ်
March 2011 edited April 2011 in Tech News
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော CDMA 800MHz ဖုန်းများ၏ ငွေဖြည့်ကဒ် (Prepaid Top-up Card) များသည် ယခင်က ငွေဖြည့်သည့်အချိန်မှစ၍ ၁၀ နှစ်ကြာမှ သက်တန်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ ၆ လ အတွင်းကုန်အောင် သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။ အ၀င်ပဲလက်ခံမယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံချွေတာလို့မရတော့ပါ။ ငွေဖြည့်ကဒ်မှ ငွေကို သင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ၊ အသုံးမပြုသည်ဖြစ်စေ . . ၆ လ ကြာလျှင် အလိုအလျှောက် ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင့် အိပ်ကပ်အတွင်းမှ ငွေ တစ်သောင်းအား MPT သို့ ၆လလျှင် အနည်းဆုံး ၁သောင်းတော့ ပေးသွင်းနေရမည့်သဘောပင် . . .။
CDMA 800MHz ၏ Internet Bandwidth ကိုလည်း January နှင့် February လ အတွင်း 1.5 Mbps မှ 2.0 Mbps အတွင်းရရှိခဲ့သော်လည်း March လ ၂ ရက် မှ၍ 128 kbps သို့လျှော့ချခဲ့သည်။ ထို့နောက် 64 kbps သို့ ထပ်မံလျှော့ချခဲ့ပြန်သည်။ သို့သော် Internet ၁ မိနစ်အသုံးပြုခကိုမူ လျှော့ချပေးခဲ့ခြင်း လုံး၀ (လုံး၀) မရှိခဲ့ပေ . . .။ ၁ မိနစ် ၄ ကျပ်ဖြင့်သာ ဆက်လက်ကောက်ခံခဲ့သည်။
ဒီသတင်း ဘယ်လောက်ထိခိုင်မာသလဲ။ ဂျာနယ်တွေကဆိုရင်တော့ ချင့်ယုံပါ။
ထောက်ခံပါတယ်။ ဂျာနယ်တွေဆိုတာ တစ်ချို့သတင်းတွေကို သေချာမသိပဲ လျှောက်ရေးတာတွေရှိပါတယ်။ တစ်ခါလည်း သတင်းတစ်ခု အဲလိုဖြစ်ဘူးပါတယ်။ ဘာသတင်းလဲမပြောတော့ပါ။ တစ်စောင်က တစ်မျိုးရေး၊ နောက်တစ်စောင်က တစ်မျိုးရေးပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့။ နှစ်စောင်ဖတ်ပြီး ဘာယုံရမှန်းမသိတော့ပါ။
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်ထင်တာပြောရရင် အရင်ပိုက်ဆံကဒ်နဲ့သွင်းပြီးတဲ့သူတွေက ၁၀ နှစ်သုံးလို့ရပြီး အခုအသစ်ထုတ်တဲ့ ကဒ်တွေက သက်တမ်း ၆ လ ရှိတာ။ အဲဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းအသစ်ထုတ်ပြီး ပိုက်ဆံဖြည့်မယ်ဆိုရင် သက်တမ်း ၆ လပေါ့။ ဖုန်းမှာ လက်ကျန်ငွေရဲ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်က အမှန်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၁၀နှစ်ကနေ ၆လ လျှော့လိုက်တာ မှန်ပါတယ်။
ဖုန်း ၃လုံး ကို ပြီးခဲ့တဲ့ တပါတ် အတွင်းက ငွေဖြည့်ပေးလိုက်တာမှာ သွားတွေ့မိပါတယ်။
မြန်မာငွေ ကိုသာ ၆လ ကန့်သတ်လိုက်တာပါ။
FEC ကတော့ မူလ အတိုင်း ၁၀နှစ် ပါပဲ။ မပြောင်းလဲသေးပါ။
FEC သွင်းထားတဲ့သူများကတော့ တပါတ်ကို တခါလောက် လက်ကျန်ငွေကို ပြန်လည်ကြည့်ပေးဖို့တော့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
တော်ကြာ သက်တမ်းကုန်သွားလို့ သွင်းထားတဲ့ငွေလဲ ဒိုင်စားသွားပြီး နိုင်ငံခြား အ၀င်လက်ခံရမှာတွေ လွတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
သတိလေးတော့ ထားပြီး ကြည့်ကြပါခင်ဗျား။
ကောက်ရိုးမီး ပေါ်လစီ ကို မျက်ခြည်ပြတ်လို့ မဖြစ်ပါ။
ဒီသတင်းမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ တာ၀န်ရှိတဲ့လူတွေက တော်တော်ကို တရားမဲ့၊စဉ်းစားဥဏ်မဲ့လုပ်တာပါပဲ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒီဖုန်းတွေက ငါးသိန်းပေးထားရတာပါ။ သူများနိုင်ငံလို တပ်ဆင်ခမပေးရဘူးဆိုရင်တော့ လုပ်ပါ။ ခြောက်လမဟုတ်ဘူး။တစ်လလဲ လုပ်လို့ရတယ်။ ကြိုက်ရင် ၀ယ်သုံးမယ် ၊ မကြိုက်ရင် ၀ယ်မသုံးဘူး။ အများသုံးဖုန်းပဲသုံးမယ်။ အခုက ကျွန်တော်တို့က ငါးသိန်းပေးပြီးပြီလေ။ သူများနိုင်ငံတွေလို
sim card ကိုအလကားပေးပြီး ပြောခကိုပဲ အဓိက ကောက်တာဆိုရင်တော့ အဲလိုကန့်သတ်တာမှန်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော်တို့က ငါးသိန်းပေးပြီး ရင်းထားရတာ။ ဒီပြောခပိုက်ဆံကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ထည့်
အင်း... ကောင်းလေစွ... CDMA 800 MHz က ကွန်နက်ရှင် ကောင်းသားလို့ပြောသံကြားတာနဲ့ ၀ယ်ဖို့ကြံမိတယ်... 128 ထိချလိုက်တာလည်း သိလိုက်သေးတယ်... ဖုန်းကတော့ လျှောက်ပြီးသွားပြီ... ဒါပေမယ့် 128 လည်း 128 ပေါ့ ဆိုးပါဘူးလေလို့ တွေးနေတာ... တကယ်ဖုန်းလည်း ထုတ်လာရော 128 မရပါဘူးမှတ်တယ်... 64 တဲ့ကိုး... ကောင်းပါလေလေ့...
Dial up နဲ့သုံးနေရာက နည်းနည်းလားမြန်မလားလို့ ၀ယ်မိတာပါဗျာ... ခုတော့ 56 Kbps နဲ့ ဘာများကွာတုန်း... စိတ်ပါနာရော...
မချမ်းသာပါဘူး... ကျောင်းပြီးကတည်းက အလုပ်လက်မဲ့ဘ၀နဲ့နေလာတာ ၃ နှစ်တောင်စွန်းပြီ... ခုတော့ဗျာ... လူကသာ အလုပ်လက်မဲ့... ဖုန်းကျတော့ 3G ဆိုပြီး ညာရောင်းထားတဲ့ 09-550xxxx က တစ်လုံး၊ ဒီ CDMA 800 MHz က တစ်လုံး... ရှက်ဖို့တောင်ကောင်းသေး...
ပြန်ရောင်းရအောင်ကလည်း CDMA ကြီးက အနည်းဆုံး ၁ ပုံးတော့ ရှုံးမှာပဲ... 3G အတုကြီးက ၁၈ ပုံးနဲ့ဗျာ...
ဒါမှန်းသိရင် CDMA + Handset ၆ ပုံးခွဲလောက် ဂျပန်ငလျင်မှာ သွားလှူပါတယ်... :mad:
၁၀ နှစ်ကနေ ၆လ လျှော့တာကတော့ လွန်လွန်းပါတယ်။ bandwidth ကတော့ ပြောမနေနဲ့။ အနည်းဆုံးကို ချပေးမှာ။ လုံး၀တော့ မပိတ်တာသေချာတယ်။ ပိတ်ရင် ပိုက်ဆံရတော့မှာမဟုတ်လို့။ နှေးလို့ရသလောက်တော့ နှေးအုန်းမှာပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံ ရလိုမူတခုတည်းနဲ ့လုပ်တာလားဗျာ။ သုံးစွဲတဲ့လူတွေကို တော့ ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်။ အခုက dialup ကတောင် ပိုမြန်နေတယ်ဗျာ။
စျေးနှုန်းတာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မမီချင် မမီမယ်.. ကျန်တာတေ့ာ လာခဲ့.. တတ်လည်း တတ်နိုင်ပါပေ့...
အခု ဒါဆို ရန်ကုန်မှာ အမြန်ဆုံး ကွန်နက်ရှင်က ဘာလဲ။ ဖိုင်ဘာလား???
နောက်ဆို dial-up ကပဲ အမြန်ဆုံးဖြစ်တော့မယ်...
ကျွန်တော်ကတော့ ဖြစ်လေရာဘ၀တိုင်းမှာ connection ကောင်းသောနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ရပါလို၏ လို ့ပဲဆုတောင်းနေတော့မယ်
I am also using 800 Mhz...
At the start, download speed reach to 310 kbps ...
But not below 10 kbps ....
That is horrible ... Not fair ...
ဘာမှကို မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာ :biggrin: